Impendulo: Ukuphumelela ukuKhangela ukuKhangela ukuKhangela ngokuKhangela | Martech Zone
Impendulo: Ukuphendula ngokuNxibelelana noMnxeba oSebenzayo oNomdla
Lwesine, Matshi 8, 2018 NgoLwesithathu, Matshi 7, 2018 Douglas Karr
Biza iqonga lobukrelekrele, ImpenduloTap, uvelise inqaku elitsha, Umdlalo olumkileyo, evumela abasebenzisi ukuba babone ixabiso elichanekileyo kwifowuni nganye yomthengi engenayo kunye nokuyibeka kumthombo wentengiso, nokuba uye kwigama elingundoqo.
Ukukwazi ukulandela umkhombandlela okhokelayo kwaye emva koko unike ingeniso kunye nexabiso lomda kuye kwaba linyathelo elikhulu kuthi. USimon Hoe, oyiNtloko yeDijithali kwi Isikhephe 1st
Esi sixhobo sixhasa ukusetyenziswa kwedatha yokwandisa imikhankaso yabo bobabini abathengisa ngaphakathi ezindlwini kunye neearhente zentengiso, kunye nokuvumela iiarhente ezinabaxumi abenza umnxeba ukuba banike ingxelo nge-ROI ngqo.
Kude kube ngoku, ukudibanisa ingeniso yokufowuna kwimisebenzi yentengiso efunekayo kwiiarhente zeziko loqhakamshelwano kumaxabiso aphambili ngesandla kwinkqubo eyahlukileyo, okanye ukusebenzisa ukudityaniswa kwenkqubo yabo yeCRM, ebingasoloko ichanekile okanye inokwenzeka.
Umdlalo olumkileyo sisiqwenga esilahlekileyo sephazili lokunika ingxelo kubathengisi. Ayisiyiyo kuphela yokwandisa amaphulo ngokusekwe kwiifowuni ezininzi ezenziweyo, kodwa unokulungelelanisa indlela yakho esekwe kwingeniso okanye kwinzuzo eyenziweyo. Kulula ukusebenzisa iMart Match ukuze ufumane imithombo eqhuba ixabiso lakho lokuthengisa. UNick Ashmore, usekela-Mongameli weNtengiso kwi-ResponseTap
Ngoku basebenzisa iMart Match, abathengisi banokuthi, ngokudityaniswa okungahambelaniyo, babonise intengiso yokufowuna kuyo yonke indawo yokuthengisa eyenzekileyo ngaphambi komnxeba.
Iingxelo zeFowuni yokuBandakanya zibandakanya:
Ingxelo yokuFumana ukuFikelela - ukubonakala kwawo onke amaphulo akho kunye nomsebenzi wentengiso kwindawo enye. Ukutshintsha phakathi kwePhulo, iTshaneli okanye iMedium yokujonga ulwazi apho intengiso ivelisa khona eyona minxeba, ingeniso kunye nengeniso.
Ingxelo yokuthelekiswa kwesabelo - thelekisa iimodeli zokunikezela ezininzi ngokusekwe kumanyathelo ahlukeneyo. Fumanisa indlela ivolumu yokufowuna, ingeniso yokuthengisa kunye nenzuzo eyahlukileyo kwimodeli enye ukuya kwenye.
Fumana iDemo yoMdlalo oBalaseleyo
tags: intengisobing ipheumnxeba umnikelounikezelo lwejeloIintengiso ze-facebookUgoogle organicUgoogle ppcUkunikezelwa kweefowuni eziphilayoimpenduloUmdlalo olumkileyo
Amashishini kufuneka aNxibelelane njani neQonga ngalinye lezeNtlalo
I-SalesRep.ai: Sebenzisa ubuGcisa ukuZenzekelayo ukuNxibelelana kweThemba eliNinzi